‘नम्रता’ वास्तविक पात्र « Loktantrapost
‘नम्रता’ वास्तविक पात्र
७ फाल्गुन २०७३, शनिबार १६:५६
अहिलेका चल्तीका लेखक हुन् कृष्ण अविरल । रक्तकुण्ड, शाहवंशको शल्यक्रिया, जल्लादको मन, लालचुडी, रक्तबीज, विषपुरुषजस्ता कृति लेखिसकेका अविरलले हालै झापाकै परिवेशमा लेखिएको उपन्यास नम्रता बजारमा ल्याएका छन् । झापा धुलावारीका उनले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएका छन् । उनै अविरलसँग भर्खरै आएको उपन्यास नम्रताका विषयलाई लिएर लोकतन्त्र पोस्टसँग गरिएको कुराकानी ।
नम्रता कस्तो उपन्यास हो ?
किशोरकिशोरीको मनोविज्ञानमा आधारित विशुद्ध रुपमा सामाजिक उपन्यास हो । किशोर उमेरमा हुने विपरित लिङ्गीप्रतिको आकर्षण, त्यसलाई लिएर बाबुआमाले गर्ने व्यवहार, त्यसबाट किशोरकिशोरीमा पर्ने मनोवैज्ञानिक असर यसको मूल विषय हो । यससँगै ०४५ साल सेरोफेरोको झापाको राजनीतिक र सामाजिक जनजीवन पनि समेटिएर आएको छ ।
रक्तकुण्ड, शाहवंशको शल्यक्रिया, जल्लादको मन, विषपुरुष, रक्तबीज आदि नाम गरेका किताब लेख्ने मान्छे । यसपटक नम्रता आयो । तपाईंको आनीबानी पनि नम्र भएको हो ?
जन्मजात रुपमा बनिआएको आनीबानी फेरिन मुस्किल हुन्छ । अरुले बाहिरबाट देख्दा अविरललाई खरो स्वभावको देखे पनि म सकारात्मक सोच राख्ने मान्छे हुँ । मलाई पटक्कै मन नपराउने मान्छेको पनि म राम्रा गुणको अनुकरण गर्छु । विगतमा रक्तकुण्ड, रक्तबीजहरु लेखे पनि यसपटक पाठकलाई फरक स्वाद दिने उद्देश्यले नम्रता ल्याएको हुँ ।
पाठक प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
एकदमै उत्साहजनक छ । बजारमा आएको १५ दिनमै दोस्रो संस्करणका लागि प्रेस गयो । पढेर आँशु थाम्नै सकिन भन्ने पाठक थुप्रै भेटेँ । नम्रतालाई त्यति सारो दुःख किन दिएको ? खडानन्दको घमण्ड तोडिदिएर नम्रतालाई उसको प्रेमी गोविन्दसँग बिहे गराइदिएको भए लेखकको के जान्थ्यो ? भनेर आपत्ति जनाउने पाठक पनि थुप्रै हुनुहुन्छ । जेहोस् सोचेभन्दा निकै उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाइरहेको छु ।
यो नाम त अहिलेकी चल्तीकी नायिकाको नामसँग मिल्छ । अर्को नाम राख्न सकिन्नथ्यो ?
यसकी मुख्य पात्र अलि विद्रोही स्वभावकी भएकीले नाम नम्रता राखिएको हो । नायिकाको नामसँग मिल्नु चै संयोग मात्र हो ।
तपाईं झापाको धुलावारीमा हुर्के बढेको मान्छे । नम्रताको परिवेशका लागि झापाको भद्रपुर नै रोज्नुको कारण ?
वास्तविक नम्रता भएको ठाउँ खासमा बिर्तामोड छेउको बुट्टाबारी हो । तर मैले यसको परिवेशका लागि भद्रपुर रोजेँ । किनकि भद्रपुर भनेको ०७ सालभन्दा अघिदेखि चिनिएको ठाउँ । देशको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि अमूल्य योगदान दिएको ठाउँ । अहिले सबैतिरबाट उपेक्षित छ । ओझेलमा परेको छ । व्यापारीदेखि नेताहरु समेतले बिर्सिसके । मृत सहरका रुपमा चिनिन थालिसक्यो । त्यो ठाउँलाई साहित्यको माध्यमबाट पनि पुनर्जीवन दिन सकिन्छ कि भनेर भद्रपुर, राजगढ, धाइजनजस्ता ठाउँलाई उपन्यासको परिवेश बनाएको हुँ ।
भनेपछि नम्रता उपन्यासकी पात्र वास्तविक हुन् ?
एकदमै । अहिले पनि तपाईले चाहनु भयो भने भेट्न सक्नु हुन्छ । कसैसँग प्रेम गरेकै कारण नम्रताले जस्तै मानसिक प्रताडना भोग्ने नम्रताहरु अनि छोराछोरीलाई कठोर अनुशासनमा राख्न खोज्ने खडानन्दहरु त हाम्रो समाजमा कति छन् कति ? टोलटोलमा भेटिन्छन् ।
नम्रता किन पढ्ने ? यसबाट पाठकले के पाउँछन् ?
कुनै पनि पुस्तक पढेर पाठकले पाउने भन्ने कुरा उसको सोचाइ, अर्थात् बौद्धिक धरातल अनुसार फरकफरक हुन सक्छ । जस्तो किशोरकिशोरी उमेरका छोराछोरीका अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीप्रति गर्दै आएको व्यवहारका बारेमा एकपटक पक्कै आत्मसमीक्षा गर्छन् । उमेर नपुगी गरिएको प्रेमले दुर्घटना निम्त्याउने रहेछ, भविष्य अन्धकार हुने रहेछ भन्ने कुरा किशोरकिशोरीले थाहा पाउने छन् । आफ्नो प्रेममा तड्पिएकाहरुले आफ्नो अन्धप्रेमका बारेमा पुनर्विचार गर्ने छन् । राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरुले ०४५ साल सेरोफेरोको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा थाहा पाउने छन् । सामाजिक अध्येताहरुले ३०–३५ वर्षको अवधिमा समाजमा कुन हदको परिवर्तन आएछ भनेर छर्लङ्ग हुने छन् ।